Kungani amazwe ase-Afrika ekhokha intela yamakoloni eFrance yize ezimele? - Afrikhepri Foundation
I-18 min ifundwe
LUbuwazi Ngisho nanamuhla, amazwe amaningi ase-Afrika ayaqhubeka nokukhokha intela yamakoloni eFrance, yize ezimele!
Kwamazwe asanda kuzimela kwakudingekile ukuthola ukuyekethisa neFrance. USylvanus Olympio, umongameli wokuqala weRiphabhliki yaseTogo, izwe elincane eNtshonalanga Afrika, wathola isisombululo esingahle sithulise isiFulentshi:
Engafuni ukuqhubeka nokubusa kwesiFulentshi, wenqaba ukusayina isivumelwano se-colonization ehlongozwa nguDe Gaule, kodwa wavumelana ngokubuyisela ukukhokha isikweletu saminyaka yonke eFrance ngezinzuzo okuthiwa zitholakala ngesikhathi samakholoni aseFrance.
Lezi yizona kuphela izimo zaseFrance ezingabhubhisi izwe ngaphambi kokushiya. Kodwa-ke, inani elilinganiswa yiFrance lalikhulu kakhulu kangangokuthi ukubuyiselwa kwalokhu okuthiwa "isikweletu samakholoni" kwakuseduze ne-40% yebhajethi yezwe ku-1963.
Ngenxa yalokho, isimo sezezimali se-Togo nje esizimele sasingazinzile kakhulu, futhi ukuze kuphume lesi simo, i-Olympio yanquma ukushiya uhlelo lwemali olwakhiwa yiColonial France i FCFA (franc yamaFoloni ase-Afrika), futhi wadala imali yezwe.
I-January 13 1963, ngemva kwezinsuku ezintathu, waqala ukunyathelisa amanothi amasha, iqembu lamasosha ase-(kusekelwa France) ethumba wabulala umongameli wokuqala akhethwe Afrika ezimele: Olympio wabulawa ngumuntu wangaphambili French Legionnaire, usayitsheni ibutho Etienne Gnassingbé ngenhlanhla wathola ngesikhathi emaRandini premium 612 wendawo French Embassy i-ngokuphumelela komsebenzi wakhe.
Iphupho lika-Olympio kwakungokwakha izwe elizimeleyo nelinamandla. Kodwa lo mbono awuhambisani nezifiso zaseFrance.
I-30 Juni 1962, u-Modiba Keita, umongameli wokuqala weRiphabhlikhi yaseMali, naye wanquma ukuhoxisa uhlelo lwezimali FCFA (olubekwa kuma-12 amazwe asanda kumela amazwe ase-Afrika).
Ngempela, umongameli waseMaliya, owathembele kakhulu emnothweni wezenhlalakahle, kwacaca ukuthi ukoloni oluhlala njalo nalesi sivumelwano neFrance, waba ngumgibe, umthwalo wokuthuthukiswa kwezwe.
I-19 November 1968, efana no-Olympio, uKeita izoba yisisulu sokuxoshwa komunye umuntu owayenguLegionary Foreign Affairs, uLieutenant Moussa Traoré.
Eqinisweni, phakathi nalesi sikhathi sesiyaluyalu lapho Afrika wayelwa ukuzikhulula ejokeni ingcindezelo European, France izosebenzisa e izikhathi eziningi ngaphambili owayengenalusizo inxusa Foreign Legion mercenary ukwenza ngezibhakela hit imisebenzi ngokumelene abongameli elisanda kuqokwa:
Ngo-1er Januwari 1966, uJean-Bedel Bokassa, owayengumFulentshi wesifundazwe saseFrance, wambamba uDavid Dacko, umongameli wokuqala weCentral African Republic.
I-January 3 1966, uMaurice Yaméogo, umongameli wokuqala we-Republic of Upper Volta, manje ebizwa ngokuthi Burkina Faso, wahlupheka buhlungu ngu lamizana sangoulé, a legionnaire wangaphambili French ezazilwa amabutho French e-Indonesia nase-Algeria ngokumelene nala mazwe ukuzimela
Ngo-October wangonyaka 26 1972 Kerekou owayeyilungu Unogada uMongameli Hubert Maga, umongameli wokuqala we-Republic of Benin, uye wasebenzelana umbuso ngokumelene umongameli, ngemva kokuya French izikole wezempi 1968 1970.
Eqinisweni, eminyakeni yamuva 50, 67 Imininingwane isibhamu isimo ezenzeka 26 amazwe e-Afrika, 16 lala mazwe owabe amakoloni isiFulentshi, okusho 61% we amasu okugumbuqela imibuso e-Afrika izinyathelo zokwenza e wangaphambili amakoloni French.
Inani lemivimbo e-Afrika ngezwe
Inombolo ye-coup de état
I-Congo - i-DRC
I-TOTAL (1 + 2)
Njengoba lezi zibalo zibonisa, iFrance iyakhathazeka ngokuphelele, kodwa isebenza ngokulondoloza amandla amakhulu emakoloni ayo kungakhathaliseki ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi kuyini intengo.
Ngo-Mashi 2008, owayenguMongameli waseFrance uJacques Chirac wathi:
"Ngaphandle kwe-Afrika, iFransi izokwehla ngaphansi kwesigaba samandla esithathu [sezwe]"
Owandulela uJacques Chirac François Mitterrand usuvele eprofetha ku-1957 ukuthi: "Ngaphandle kwe-Afrika, iFrance ngeke ibe nomlando ngekhulu lesishiyagalolunye"
Ngesikhathi nje lapho ngibhala lesi sihloko, amazwe e-14 aseAfrika aphethwe yiFrance, ngokusebenzisa isivumelwano samakholoni, ukubeka i-85% yemithombo yawo e-Central Bank of France ngaphansi kokulawulwa kweNgqongqoshe Yezezimali yaseFrance. Kuze kube manje, ku-2014, eTogo nakwamanye amazwe ase-Afrika e-13 kumele akhokhele isikweletu samakholoni eFrance. Abaholi base-Afrika abenqabayo babulawa noma bahlaselwa yi-coup d'etat. Labo abalalelayo basekelwa futhi bavuzwa yiFrance ngendlela yokuphila enhle, kuyilapho abantu babo bebhekene nosizi nokuphelelwa ithemba.
Uhlelo olubi olunjalo, luphikiswa yi-European Union, kodwa iFrance ayilungele ukwenza ngaphandle kwalesi simiso sekholoni esinika imali engaba yizigidigidi zamaRandi ezingu-500 ezivela e-Afrika, futhi ngonyaka.
Sivame ukusola abaholi be-Afrika benkohlakalo futhi sikhonze izithakazelo zamazwe aseNtshonalanga, kodwa kukhona incazelo ecacile yalokhu kuziphatha. Baziphatha ngale ndlela ngoba besaba ukubulawa noma ukuhlukunyezwa kwe-coup d'etat. Bafuna ukuzihlanganisa nesizwe esinamandla ukuzondla ngokwabo uma kunesihluku noma ubunzima. Kodwa, ngokungafani nokuvikelwa okunobungane, ukuvikelwa kweWest kuvame ukunikezwa ngokushintshana kokuyeka ukukhonza abantu babo noma izintshisekelo zezizwe.
Abaholi base-Afrika bazosebenza ngentshisekelo yabantu babo uma behluleka ukuhlukumezwa futhi besatshwe ngamazwe akoloni.
E-1958, esaba kakhulu imiphumela yokuzikhethela kwakhe ukuzibusa ngaphandle kweFrance, uLéopold Sédar Senghor uthe: "Ukukhetha kwabantu baseSenegal kungukuzimela, bafuna ukuthi kwenzeke kuphela ebuhlotsheni neFrance. France, hhayi ekuphikisaneni. "
Ngakho-ke iFrance yamukele "ukuzimela ephepheni" yamakoloni ayo, kodwa isayine "izivumelwano zokubambisana" ezifanayo, echaza uhlobo lobuhlobo babo neFrance, ikakhulukazi izibopho zemali ( Franc), uhlelo lwezemfundo lwesiFulentshi, izivumelwano zempi kanye nokuthandwa kwezohwebo.
Nazi izingxenye eziyinhloko ze-11 zokuqhubeka kwepakethe yekoloni kusukela eminyakeni ye-1950:
1.Isikweletu sobukoloni sezinzuzo ze-colonisation yaseFrance
Amazwe asanda "azimele" kufanele akhokhele ingqalasizinda eyakhiwe yiFrance kuleli lizwe ngesikhathi sekoloni.
Ngisadingeka ngithole imininingwane mayelana namanani, ukuhlolwa kwezinzuzo zamakholoni kanye nemigomo yokukhokha enikezwe kumazwe ase-Afrika, kodwa sisebenza kuwo (ukusisiza ngolwazi).
2.Ukuthunjwa ngokuzenzakalelayo kwezinqolobane zikazwelonke
Amazwe ase-Afrika kufanele afake izimali zabo zezimali ezweni lonke eFrance ebhange eliphakathi.
France uye wabambelela izinqolobane yamazwe nane Afrika kusukela 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo -Brazzaville, Guinea Equatorial Gabon.
Inqubomgomo yemali elawula ukuqoqwa kwamaqembu ahlukahlukene kangaka emazweni alula ngoba ilawulwa yiMgcinimafa waseFrance, ngaphandle kokubhekisela kweziphathimandla zentela eziphakathi, njenge-UEMOA noma i-CEMAC. Ngaphansi kwemibandela yesivumelwano esabekwa yibhange eliphakathi kweCFA, iBhange eliPhakathi ngalinye lasezweni lase-Afrika libophezelekile ukuthi ligcine okungenani i-65% yezindawo zokugcina izimali zangaphandle "kwi-akhawunti yokusebenza" ebanjwe Umgcinimafa waseFrance, kanye nomunye u-20% ukumboza izikweletu zezimali.
I-CFA ibhange eliphakathi liphinde libeke isilinganiselwa esikhwameni esinikezwe ezweni ngalinye ilungu elilingana ne-20% yemali engenayo yezwe ngonyaka odlule. Ngisho noma ngabe i-BEAC ne-BCEAO inesidingo esikhulu sokwedlula imali ku-Treasury yaseFrance, izikhungo ezingaphezu kwe-overdraft zihambisana nemvume yoMgcinimafa waseFrance. Igama lokugcina yiloMgcinimafa waseFrance otshale izimali ezingaphandle kwamanye amazwe ase-Afrika egameni lawo eParis Stock Exchange.
Ngamafuphi, ngaphezu kwe-80% yezinqolobane zokushintshaniswa kwamanye amazwe zala mazwe ase-Afrika afakwa kwi "akhawunti yokusebenza" elawulwa yiMgcinimafa waseFrance. Amabhange amabili e-CFA angama-Afrika, kodwa awunazo izinqubomgomo zabo zemali. Amazwe ngokwawo angazi, angaziswa, ukuthi ingakanani imali yokugcinwa kwemali yangaphandle egcinwe yiMgcinimafa waseFrance kungokwabo njengeqembu noma ngabanye.
Izindleko zokutshala izimali zalezi zimali zeFrench Treasury kufanele zifakwe kwi-exchange reserve yangaphandle, kodwa akukho ukubalwa kwezimali okudluliselwa kumabhange noma emazweni, noma imininingwane yalezi zinguquko. "Iqembu elincane kuphela lezikhulu eziphezulu zeFrench Treasury ziyazi izimali" kuma-akhawunti okuhweba "lapho lezi zimali zimali; uma kukhona inzuzo kulezi zimali; ayavunyelwe ukudalula lolu lwazi kumabhange e-CFA noma amabhange asezindaweni zase-Afrika. "Ubhala uDkt Gary K. Busch
Kucatshangwa ukuthi iFrance ilawula cishe izigidigidi ze-500 zemali yase-Afrika ngemali yayo, futhi ayenzi lutho ekukhanyiseni lo mkhakha omnyama wobukhosi obudala.
Inhloso ihlala: Amazwe ase-Afrika awanakho ukufinyelela kule mali.
I-France ivumela ukuthi bafinyelele kuphela ku-15% yemali yabo ngonyaka. Uma badinga okungaphezulu, amazwe ase-Afrika kufanele akhokhwe, kumazinga ezentengiselwano, i-65% yemali yabo egcinwe ku-Treasury yaseFrance.
Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, iFrance igxilisa ukushayela ngemali yemali amazwe angabaleka kuyo. I-plailing isethwe ku-20% yemali engenayo yomphakathi kusukela ngonyaka odlule. Uma amazwe adinga ukuboleka ngaphezu kwe-20% yemali yawo, i-France ine-veto.
UMongameli wangaphambili waseFrance uJacques Chirac usanda kukhuluma ngemali yamazwe ase-Afrika emabhange aseFrance. Nayi ividiyo ekhuluma ngesistimu yokusebenza yesiFulentshi. Nansi umbhalo ofushane wenkambinkimbi: "Kumelwe sibe qotho futhi siqaphele ukuthi imali eningi ebhange lethu ifika ngokuqondile ekusetshenzisweni kwezwekazi lase-Afrika".
3.Ilungelo lokubaluleka ngaphezu kwanoma iyiphi imithombo eluhlaza noma yemvelo etholakala ezweni
I-France ibaluleke kakhulu ekuthengeni yonke imithombo yemvelo yezwe lamakoloni ayengaphambili. Kuyinto nje yokwenqaba ukuthi amazwe ase-Afrika avunyelwe ukufuna abanye abalingani.
4.Okuphambili kwezidingo zaseFrance kanye nezinkampani ezimakethe zomphakathi nezakhiwo zomphakathi
Ekunikezeni izinkontileka zomphakathi, izinkampani zaseFrance kufanele zibhekwe njengendawo yokuqala, futhi kuphela emva kokuba izimakethe zangaphandle zibhekwe. Iqiniso lokuthi amazwe ase-Afrika angathola izinhlinzeko ezingcono zezezimali kwenye indawo engacatshangelwa.
Ngenxa yalokho, emakoloni amaningi aseFrance, zonke izinkampani ezinkulu kanye nabadlali bezomnotho ezisezandleni zamaFranti aphesheya. Ngokwesibonelo, eCôte d'Ivoire, izinkampani zaseFrance zinomnikazi futhi zilawula zonke izinsizakalo ezinkulu zomphakathi - amanzi, ugesi, ucingo, ezokuthutha, amachibi kanye namabhange amakhulu. I-Ditto ekuhwebeni, ekwakhiweni nasezolimo.
Ekugcineni, njengoba ngibhala esihlokweni esandulele, abantu base-Afrika manje bahlala ezwenikazi elinabaseYurophu!
5.Ilungelo elilodwa lokuhlinzeka ngemishini yezempi nokuqeqesha izikhulu zempi zamazwe
Ngenxa yesimiso esiyinkimbinkimbi semfundo, izibonelelo, kanye "nezivumelwano zokuzivikela" ezihlanganiswe ne-colonal, abantu base-Afrika kumele bathumele izikhulu zabo zokuqeqesha eFrance noma ezisekelweni zezempi zaseFrance.
Isimo sezwekazi sinjalo ukuthi iFrance iqeqeshwe futhi yondla amakhulu, ngisho nezinkulungwane zabathengi. Zihlala isikhathi eside uma zingadingeki, futhi ziqaliswe uma kudingeke ukuba uthole i-coup d'etat noma ezinye izinjongo!
6.Ilungele iFrance ukuba lihanjiswe ngamabutho futhi lingenele empini ezweni ukuze livikele izithakazelo zalo
Ngaphansi kwegama elithi "Izivumelwane Zokuzivikela" ezixhunywe kulesivumelwano samakoloni. I-France inelungelo lokungenelela empini emazweni ase-Afrika, futhi ukubeka amasosha ngezikhathi zonke ezisekelweni zempi kanye nokufakwa, ephethwe ngokuphelele yiFulentshi.
Izisekelo zezempi zaseFrance e-Afrika
Ngesikhathi uMengameli Laurent Gbagbo waseCôte d'Ivoire ezama ukuqeda ukuxhashazwa kweFrance kulelizwe, iFrance yahlela ukukhishwa kwamacala. Phakathi nenqubo ende yokushayela uGbagbo emandleni, amathangi aseFrance, ama-helicopter alwa nempi ekhethekile, wangenela ngqo empini, waxoshwa ezakhamuzi futhi wabulala abaningi.
Okwamthukuthelisa kwaba ukulimala, France ebheka khona ukuthi umphakathi ibhizinisi French ke elahlekile ayizigidi eziyizinkulungwane eziningana ngeminako ukushiya Abidjan 2006 (lapho kwakukhona impi yama-French zibulawa 65 abazihlelele bengahlomile futhi elimele Abanye abangu-1200.)
Ngemva impumelelo le Icebo lika-France, nokudluliswa amandla-Alassane Ouattara, France zacela uhulumeni Ouattara ukukhokhela isinxephezelo kulabo umphakathi wezamabhizinisi French for ukulahlekelwa phakathi nempi yombango.
Empeleni, uhulumeni wase-Ouattara wabakhokhisa kabili lokho abakushoyo ukuthi balahlekelwa lapho behamba.
7.Isibopho sokwenza isiFulentshi ulimi olusemthethweni ezweni kanye nolwazi lwemfundo
Yebo, mnumzane. Kumelwe ukhulume isiFulentshi, ulimi lwaseMolère! Ulimi lwesiFulentshi nenhlangano yokwahlukana kwesiko kwadalwa. Ebizwa ngokuthi "Francophonie" eqoqa ngamagatsha amaningana nezinhlangano ezixhunyanisiwe konke okulawulwa yiNgqongqoshe weFrance weZangaphandle.
Njengoba kuboniswe kulesi sihloko, uma uFulentshi ukhuluma ulimi olulodwa, uzokwazi ukufinyelela ngaphansi kwe-4% yolwazi lomuntu nemibono. Kunciphise kakhulu.
8.Isibopho sokusebenzisa imali yeColonial France i FCFA
Lokhu kuyinkomo yangempela yemali yeFrance, uhlelo olubi olunjalo, lugxeka yi-European Union, kodwa i-France ayilungele ukwenza ngaphandle kwalesi simiso sekholoni esinika imali engaba ngu-500 billion amadola ase-Afrika, ngonyaka.
Ngesikhathi ukwethulwa kwemali ye-Euro eYurophu, amanye amazwe aseYurophu athole uhlelo lokusebenza lwesiFulentshi. Abaningi, ikakhulukazi emazweni aseNordic, bamangala futhi baphakanyiswa ukuba baqede uhlelo, kodwa ngaphandle kokuphumelela.
9.Isibopho sokuthumela umbiko wonyaka we-France we-balance bese ugcine
Ngaphandle kombiko, akukho mali. Noma kunjalo unobhala wamabhange asezindaweni zangaphambili ze-colonies, kanye nobhala womhlangano wezigidi zezezimali zezingqungquthela zangaphambili zenziwa yibhange eliphakathi / i-treasury ephakathi.
10.Ukwenqaba ukufaka ubuhlobo bezempi nanoma yiliphi elinye izwe, ngaphandle uma ligunyazwe yiFrance
Amazwe ase-Afrika ngokujwayelekile yilabo abanokubambisana okungaphansi kombuso. Amazwe amaningi anemibuthano yempi nabakoloni be-colonizers! (funny, kodwa awukwazi ukwenza kangcono!).
Ezimweni lapho befisa khona ukusebenzisana, iFrance ibagcina kahle ukwenza kanjalo.
11.Isibopho sokubambisana neFrance esimweni sempi noma inkinga yomhlaba wonke
Amasosha angaphezu kwesigidi ase-Afrika alwela ukunqotshwa kweNazism ne-fascism phakathi neMpi Yezwe Yesibili.
Ukuzinikela kwabo kaningi akunakwa noma zincishiswe, kodwa uma ucabanga yayithatha amasonto 6 kuphela eJalimane ukushaya France e 1940, France uyazi ukuthi Afrika zingaba usizo ukugcina "ubukhulu waseFrance" ukuze esikhathini esizayo.
Kukhona into ecishe ibe yi-psychopathic mayelana nobuhlobo beFrance ne-Afrika.
Okokuqala, iFrance igxilile kakhulu ekuqothulweni nasekusetshenzisweni kwe-Afrika kusukela ngesikhathi sobugqila. Khona-ke kukhona ukungabi nalutho okuphelele kokusungula nokucabanga kwe-French elite ukuba ucabange ngaphezu kwesikhathi esidlule nesiko.
Ekugcineni, France has 2 izikhungo ukuthi zivaliwe ngokuphelele esikhathini esidlule, uhlalwe "izikhulu eziphezulu" paranoid futhi psychopathic abasakaza ukwesaba Apocalypse uma France kwakufanele ilethwe ukushintsha, futhi libhekisela kabani ngemibono njalo kuza we-romanticism yekhulu le-XNIXXth. Yilezi: UNgqongqoshe wezeMali kanye neBhajethi yeFrance kanye noNgqongqoshe Wezezizwe ZaseFrance.
Lezi zikhungo ezimbili aziyona nje isongo ku-Afrika, kepha kubaFrance ngokwabo.
Kukhona kithi ukukhulula i-Afrika, ngaphandle kokucela imvume, ngoba ngisakwazi ukuqonda isibonelo isibonelo ukuthi amasosha aseFrance ase-450 angaphatha kanjani abantu abayizigidi ezingu-20?
Ukusabela kokuqala kwabantu lapho befunda mayelana nokuba khona kwentela yamaFoland yaseKoloni ngokuvamile umbuzo: "Kuze kube nini"
Njengoba ukuqhathanisa zomlando, France wenza Haiti akhokhe okulingana yesimanje ye 21 bhiliyoni 1804 ukuba 1947 (Kwacishe kwaphela ikhulu leminyaka nesigamu) ngoba umonakalo owabangelwa kuya kuyiqiniso French kulandela ukuqedwa ubugqila nokukhululwa kwezigqila zaseHaiti.
Amazwe ase-Afrika asekhokha intela yamakholoni kusukela eminyakeni engu-50 yokugcina, ngakho-ke ngicabanga ukuthi inkulungwane yokukhokha ingaba yiningi kakhulu.
"Sikhetha ukukhululeka ekuhluphekeni ekusebenziseni ubugqila". SEKOU TOURE
Mawuna Qaphela iKoutonin
Isihloko sokuqala: http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/
Ihunyushwa yiqembu lezokuxhumana Imephu Yokuqoqa
Cabanga futhi ucebe - Napoleon Hill (Audio)
Ukuzikhuza kwansuku zonke - Martin Meadows (Audio)
Izinyanga ezi-1 ezedlule
Phendula ku Afrikhepri Foundation
Ezinsukwini eziyi-29 ezedlule
Uma ngabe le nkulumo iphathelene ne-Algeria, kufanele wazi ukuthi akekho ocele iFrance ukuthi izosilawula. Futhi uma ukhuluma ngengqalasizinda, kufanele wazi ukuthi kwakungekhona ngamehlo ethu amahle ukuthi izibhedlela, imigwaqo, izikole ... kwakhiwa kodwa kwakuwukuqinisekisa inhlala-kahle yamaza abahlali ababehlasele e-Algeria. . Abahlali abasha laba babebalekela ubuphofu obedlulele kanye nobhadane lwezifo olwaluhlasele laba bantu.
Ngubani okweleta isinxephezelo?
Eminyakeni eyi-130 yokubakhona kwalaba bantu obekufanele ukuthi beze ukuzothuthukisa abomdabu, laba bahlali baziphatha kabi futhi bakholwa ukuthi bazalwa eCote de St. Louis.
Baxoshwa noma, kunalokho, babazingela abacebile abamakholoni hhayi i-FN ababengabakhi besikebhe selokhu lagcina elenziwa yizigebengu ezingenamahloni.
Ama-PN lambda eza futhi abuyele endaweni yawo yobuntwana lapho amukelwa ngemfudumalo.
Babona ukuthi okubi kwabo bekuyinhlangano embi yabasizi.
Umfel 'ukholo osisigidi nesigamu oshiywe yiFrance yamakoloni. Ngubani okufanele akhokhe?
I-Algerian kukude nokuba nobandlululo njengeziguli ngaso sonke isikhathi
hung ngonyaka we-1962.
I-PN - i-Algerian